Obboo Leencoo Lataaf:Hawwiin keenya biyya Mirgii Lammummaa (citizenship rights), mirgi dhuunfaa (individual rights), mirgi – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosObboo Leencoo Lataaf:Hawwiin keenya biyya Mirgii Lammummaa (citizenship rights), mirgi dhuunfaa (individual rights), mirgi
Obboo Leencoo Lataaf:Hawwiin keenya biyya Mirgii Lammummaa (citizenship rights), mirgi dhuunfaa (individual rights), mirgi gamtaa (group rights) akkasumas mirgootni Democracy hundi keessatti kabajamaan wal-wajji jaaruu dha.
Obboo Leencoo Lataaf Kanneen Biyya Alaatii Galaa Jiran Nuti Qeerroon Maal Gaafachuu qabna? Waliif daddabarsaa! Yoo xiqqaate hiriyaakee nama 5-9 ergii dirqamakee bahadhu!
Obbo Leencoo Lataa qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti qooddataa turuu irrayyuu hoggantoota ABO keessaa tokko turan. Qabsoo gaafa jalqaban Oromiyaa Bilisoomsuu, Walaboomsuuf Oromiyaa guddittii ijaaruu akka kaayyeeffatanii bahan dhagaa’aa guddanne.
Amma xiqqoo turaniimmoo waa’ee Bilisummaa dhiisanii gaaffiin ijoon “gaaffi dimokiraasiiti” jechuun hatattamaan digirii 360 ofirra naanna’uun “Xoophiyaa keessatti dimokiraasii dhaamna” jedhan. Obbo Leencoo Lataa nama maqaa Xoophiyaan qabsaa’u balaaleffataa turuusaanii keessattu Dr. Mararaa Guddinaa “maaliif maqaa Xoophiyaan qabsoofta?” jechaanii akka turan dhageenya.
Amma biyyatti Facaasaa as deemu galu jedhama. Kanaaf gaaffilee gadii kana qabannee bakkasaan simatamanitti argamuun akka gaafannu dhaamsa keenya.
1. Jalqaba gaafa biyya keessan lakkistanii baatan maaliif baatan? Rakkoon isin baqattanii baatan sun furmaata argateeraa? Biyyi Bilisoomeeraa?
2. Waraana WBO kuma digdama (20,000) kaamphiitti guyyaa tokkotti Oromoon dhabeef itti gaafatamaan eenyu? Akkamiin ajjeefaman?
3. Jaallan waliin qabsoo seentan kanneen ganama Irbuu seentanii waliin baatan galaniiruu? Yoo hafan ta’e isaan maaliif hafani; isinimmoo maaf galtan?
4. Erga ABO irraa addaan baatanii dhaaba qilleensarraa ODF jedhamu hundeessitanii bu’aan isin qabsoo Oromoo keessatti galmeessitan maali? Dhaabni isin hundeessitan qabsoo Qeerroo Bilisummaa waggoota 4 oliif walitti aansee gochaa jiru maaliin deggare?
5. Jaallan qaqqaaliin mooraa qabsoo keessatti hoggantoonni ABO jajjaboon Jaal/Baaroo Tumsaa fi Badhoo Dachaas akkamiitti wareegamuu dandaa’an? Maaliif akkasaan wareegaman nuuf ibsaa!
6. J/Nadhii Gammadaa dabalatee hoggantoota ABO qaqqaalii akkamiin butamuu dandaa’an? Qaamni Wayyaaneef eeruu kenneen hoggantoota kana qabsiise eenyu?
7. Dhaaba biraa hundeessuu maaltu isin kakaase, ABO ammayyuu falmaa jiru cina dhaabbachuuf fedhii akkamii qabduu?
Fi kkkf akka gaafannu dhaamsa dabarsina! Kana akka nuu deebisanis abdii qabna!
Xalayaa banaa obboo Leencoo Lataaf
Fakk.(Oromo Dialogue Forum: 15/09/2012 ON Ayyaantuu, 19/09/2012 on Ethiomedia. etc.)
Dhugaa dubbachuuf yoo taye, rakkina ilmaan Oromoorra qaqqabe, rakkina ilmaan Oromoorra jiru, bara 1991 akkamitti akka TPLF biyya qabatte, Shaabiyaan maalin akka gargaare, warri lixaa (Amerikaa fi Engiliziin) maalif Oromoo,‘uummata lakkoofsi isaa hammana baay’atu tuffatanii akka Tigroonni biyya qabatan hayyamaniif, maalif akka waraanni ABO akka harka kennatu, akka bakka jirutti qabamu, kan dide ajjeeffamu, maalif eenyu akka ajaja kenne, ilmaan Oromoo yeroo sana gammaddee.
Kana waan tayeefuu, wal gayiin kun,/WMO akka rakkina ilmaan Oromoo hiiku, akka awaasa Oromoo, warra basaastuu diinatiinis tayee beekatuma walii galtee dhabee maqaa ABO-tin daldalee warra diinaa gargaaruf addadda wal qoode deebisee, arrabaan otoo hin taane, diina fuulduratti wal yakkuun otoo hin taane, akka dhugaatti waliin mariyatee, wal amansiisee,tokko taasisee, akka bilisummaa ilmaan Oromootif dhaabatu akka taasiftan kabaja wajjinan isin gaafadha. Obboloonni keenyas, warri rakkina kanaan dura ture ilaaltanii “WMO” kana hin amanne, maqaa wal balleessuu dura mee murtee isaan dabarsan ilaalaa! Sana booda yaada keessan irratti kennuu wayya natti fakkaate.